Fitsidihan’ny masoivohon’ny Afrika Atsimo teto amin’ny Antenimierandoholona. – Sénat de Madagascar
Fitsidihan’ny masoivohon’ny Afrika Atsimo teto amin’ny Antenimierandoholona.
Tonga nitsidika ara-pomba fifanajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, teto amin’ny Lapa maitso Anosikely, ny Ambasadaoron’ny Afrika Atsimo Ramatoa VUYELWA MAUD DOLMO ny Alatsinainy 02 desambra 2019.
Fitsidihana sady fanaovam-beloma nohon’ny fahataperan’ny fepotoam-piasan’ity Ambasadaoron’ny Afrika Atsimo ity rehefa niasa sy nonina teto Madagasikara nandritra ny efatra taona mahery.
Nisaotra ny Filohan’ny Antenimierandoholona izy tamin’ny fiaraha-miasa izay nisy teo amin’ny roa tonta nandritra ny fotoana nijanonany teto Madagasikara. Nambarany fa lehibe tokoa ny ezaka izay nataon’ny fitondram-panjakana malagasy matoa tafita tamin’ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika sy ara-dalàna toy izao, manamarina izany ireny fifidianana nifanesy ireny. Hamafisiny amin’ny tatitra izay hataony rehefa tonga any Afrika Atsimo ny tenany fa efa dingana lehibe hoan’ny Firenena Malagasy ireo ezaka maro vita hatreto. Tokony haka lesona ihany koa anefa hoy ihany izy ny mpitondra tamin’izay zava-nitranga rehetra mba ahafahana manarina ny lesoka satria tsy misy ny firenena tanteraka.
Nambaran’ny Filoha Rivo RAKOTOVAO fa anisan’ny firenena nifanerasera matetika sy niara-niasa akaiky tamin’ny Firenena Malagasy i Afrika Atsimo ary betsaka ny hevitra natoron’izy ireo sy ny fiaraha-miasa izay natao ka nahatontosana sy nahafahana nanamora ireny fifidianana nisesy ireny. Eo ihany koa ny finiavana manokana izay nananan’ity masoivoho ity tamin’ny fifandraisana tamin’ny rehetra, nampiseho izany ny fifaneraseran’izy ireo matetika tamin’ireo Andrimpanjakana sy ny mpitondra Fanjakana fa tsy mijanona eo amin’ny sehatra tokana ihany.
« Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO: zava-dehibe ny fifidianana Ben’ny Tanàna sy Mpanolontsaina ny 27 novambra 2019
Visite de courtoisie de l’Ambassadeur de l’Afrique du Sud au Sénat de Madagascar »